အပြောင်းရွှေ့တွေနဲ့တပြိုင်နက် အဓိကကွင်းလယ်လူကို စာချူပ်သစ်ချူပ်ဆိုမယ့် ယူနိုက်တဒ် - United News Myanmar
ယူနိုက်တဒ် ရဲ့ ဒီနွေအပြောင်းရွှေ့ခြေလှမ်းတွေက ခပ်စိတ်စိတ်နဲ့ သွက်သွက်လျှောက်လှမ်းလိုဟန်တူပါတယ်။ဆိုးလ်ရှား ဟာ ဘောလုံးပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်ရေး အစီမံတွေကို တာဝန်ယူခွင့်ရပြီးနောက် အားကစားဒါရိုက်တာ၊နည်းစနစ်ဒါရိုက်တာ တွေ နဲ့ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ အပြောင်းရွှေ့ညှိနှိူင်းရေးအဖွဲ့ဟာ ကစားသမားအသစ်ခေါ်ယူရေးတွေအတွက် ပြင်းထန်တဲ့ ဖိအားတွေကို ရင်ဆိုင်ကာ အပြင်းထန် ကြိုးပမ်းနေတဲ့တပြိုင်နက် မှာပဲ တစ်ဖက်မှာလည်း အသင်းရဲ့ ရှိရင်းစွဲ ကစားသမားတွေကိုလည်း စာချူပ်သစ် တွေချူပ်ဆိုဖို့ပြင်ဆင်လာပါတယ်။
ပြင်ပ အခြေအနေတွေကိုသာမက အသင်းရဲ့အတွင်းစည်းအခြေအနေတွေကိုလည်းလက်လွှတ်မခံပဲ အသင်းရဲ့ ရာသီသစ်မစတင်ခင်မှာ တည်ငြိမ်ပြီး နိုင်ပွဲဆာလောင်တဲ့ အသင်းကို ဖန်တီးထားလိုတဲ့ ဆိုးလ်ရှား ရဲ့ ရည်မှန်းချက် ဟာ ပေါ်လွင်လာသလို ယခုတစ်ကြိမ်မှာလည်း ယူနိုက်တဒ် ဟာအသင်း ရဲ့ မရှိမဖြစ် ကစားသမားဖြစ်တဲ့ ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ် ကို စာချူပ်သစ် ချုပ်ဆိုဖို့ပြင်ဆင်လာပါတယ်။
ယူနိုက်တဒ် အနေနဲ့ ဘရူနို ကို စပို့တင်း ကနေ ခေါ်ယူခဲ့စဉ်က တစ်ပတ်လုပ်ခ ပေါင်တစ်သိန်းသာပေးချေရပေမယ့် အသင်းရဲ့ ပွဲထွက်ကစားသမားတွေထဲမှာတော့ ဘရူနို ဟာ လုပ်အားနှုန်းနဲ့ ဦးဆောင်မှု့အကောင်းဆုံး ကစားသမားဖြစ်ပေမယ့် လစာအရတော့အနည်းဆုံး ကစားသမား ဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုရပါမယ်။ ကစားသမားသစ်ဖြစ်လာတဲ့ဘဂျေဒန်ဆန်ချို ကို တစ်ပတ်ပေါင် နှစ်သိန်းခွဲနဲ့ စာချူပ်သစ် ချုပ်ဆိုထားသလို အန်သိုနီမာစီရယ်၊မားကပ်စ်ရရ်ှဖိုဒ့် တို့ဟာ ပေါင်နှစ်သိန်းစီ ရရှိနေချိန်မှာ ဘရူနို ရဲ့ လစာဟာ သေချာပေါက်တ်ိုးမြှင့်ပေးရမယ့် အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ယူနိုက်တဒ် ဟာ ဘရူနို အပြင် ပေါဂ့်ဘာ ကို တစ်ပတ်ပေါင်လေးသိန်းအထိ ပေးချေမယ့် ကမ်းလှမ်းချက်ကိုလည်း စားပွဲပေါ် တင်ထားတာကြောင့် ဘရူနိုကို တစ်ပတ်လုပ်ခ ပေါင်နှစ်သိန်း အောက်ထစ် ပေးချေလိမ့်မယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဘရူနို အနေနဲ့ သူ့ရဲ့အေးဂျင့်ဖြစ်သူထံ လွှဲအပ်ထားတယ်ဆိုပေမယ့် အသင်းရဲ့ တိုးတက်လာတဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ ကစားသမားသစ်တွေခေါ်ယူပေးမှု့ကြောင့် ကျေနပ်နေကာ ပေါဂ့်ဘာ ကိုသာ စာချုပ်သစ် တိုးပေးမယ်ဆိုရင် သူ့ရဲ့လုပ်ခလစာက်ု တစ်ပတ်ပေါင် နှစ်သိန်း ပေးရင်လည်း ကျေနပ်စွာ လေးနှစ်စာချုပ်သစ်ကို ထပ်မံ တိုးမြှင့် ချုပ်ဆိုမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဂျက်ဆီလင်ဂါဒ့် (၁၃၀၀၀၀)၊ မေဆင်ဂရင်းဝုဒ် (၁၂၀၀၀၀) တို့ ရရှိနေချိန်မှာ ဘရူနို အနေနဲ့ တစ်ပတ်ပေါင်(၂)သိန်း ရရှိတာဟာ မျှတ တဲ့ ပေးချေမှု ဖြစ်ပြီး ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ ကွင်းလယ်လူတွေထဲ ဂိုး+ဖန်တီးမှု့ စံချိန်ရှင် ကစားသမား ဖြစ်လို့ လာမယ့်ရာသီတွေမှာလည်း ဘရူနို ဟာ လစာတိုးမြှင့်စွာလက်ခံ ရရှိရင်လည်း သူ့ရဲ့စံချိန်တွေကို ပိုမို တိုးမြှင့်ပြီး ကြိုးစားမှာဖြစ်သလို ခြေသ့်အသဲနှလုံးသားနဲ့လူသားဖြစ်တဲ့ ဘရူနို ဟာ လာမယ့်ရာသီမှာ အိုးထရဒ့်ဖိုဒ့်ထံ ဆုဖလားတွေ ဆွတ်ခူးယူလာနိုင်မလားဆ်ိုတာကတော့….
ယူနိုကျတဒျ ရဲ့ ဒီနှအေပွောငျးရှခွေ့လှေမျးတှကေ ခပျစိတျစိတျနဲ့ သှကျသှကျလြှောကျလှမျးလိုဟနျတူပါတယျ။ဆိုးလျရှား ဟာ ဘောလုံးပိုငျးဆိုငျရာတိုးတကျရေး အစီမံတှကေို တာဝနျယူခှငျ့ရပွီးနောကျ အားကစားဒါရိုကျတာ၊နညျးစနဈဒါရိုကျတာ တှေ နဲ့ ပေါငျးစပျထားတဲ့ အပွောငျးရှညှေိ့နှိူငျးရေးအဖှဲ့ဟာ ကစားသမားအသဈချေါယူရေးတှအေတှကျ ပွငျးထနျတဲ့ ဖိအားတှကေို ရငျဆိုငျကာ အပွငျးထနျ ကွိုးပမျးနတေဲ့တပွိုငျနကျ မှာပဲ တဈဖကျမှာလညျး အသငျးရဲ့ ရှိရငျးစှဲ ကစားသမားတှကေိုလညျး စာခြူပျသဈ တှခြေူပျဆိုဖို့ပွငျဆငျလာပါတယျ။
ပွငျပ အခွအေနတှေကေိုသာမက အသငျးရဲ့အတှငျးစညျးအခွအေနတှေကေိုလညျးလကျလှတျမခံပဲ အသငျးရဲ့ ရာသီသဈမစတငျခငျမှာ တညျငွိမျပွီး နိုငျပှဲဆာလောငျတဲ့ အသငျးကို ဖနျတီးထားလိုတဲ့ ဆိုးလျရှား ရဲ့ ရညျမှနျးခကျြ ဟာ ပျေါလှငျလာသလို ယခုတဈကွိမျမှာလညျး ယူနိုကျတဒျ ဟာအသငျး ရဲ့ မရှိမဖွဈ ကစားသမားဖွဈတဲ့ ဘရူနိုဖာနနျဒကျဈ ကို စာခြူပျသဈ ခြုပျဆိုဖို့ပွငျဆငျလာပါတယျ။
ယူနိုကျတဒျ အနနေဲ့ ဘရူနို ကို စပို့တငျး ကနေ ချေါယူခဲ့စဉျက တဈပတျလုပျခ ပေါငျတဈသိနျးသာပေးခရြေပမေယျ့ အသငျးရဲ့ ပှဲထှကျကစားသမားတှထေဲမှာတော့ ဘရူနို ဟာ လုပျအားနှုနျးနဲ့ ဦးဆောငျမှု့အကောငျးဆုံး ကစားသမားဖွဈပမေယျ့ လစာအရတော့အနညျးဆုံး ကစားသမား ဖွဈလာတယျလို့ဆိုရပါမယျ။ ကစားသမားသဈဖွဈလာတဲ့ဘဂဒြေနျဆနျခြို ကို တဈပတျပေါငျ နှဈသိနျးခှဲနဲ့ စာခြူပျသဈ ခြုပျဆိုထားသလို အနျသိုနီမာစီရယျ၊မားကပျဈရရျှဖိုဒျ့ တို့ဟာ ပေါငျနှဈသိနျးစီ ရရှိနခြေိနျမှာ ဘရူနို ရဲ့ လစာဟာ သခြောပေါကျတိုးမွှငျ့ပေးရမယျ့ အခွအေနကေိုရောကျရှိနတောလညျးဖွဈပါတယျ။ ယူနိုကျတဒျ ဟာ ဘရူနို အပွငျ ပေါဂျ့ဘာ ကို တဈပတျပေါငျလေးသိနျးအထိ ပေးခမြေယျ့ ကမျးလှမျးခကျြကိုလညျး စားပှဲပျေါ တငျထားတာကွောငျ့ ဘရူနိုကို တဈပတျလုပျခ ပေါငျနှဈသိနျး အောကျထဈ ပေးခလြေိမျ့မယျလို့ သိရပါတယျ။
ဘရူနို အနနေဲ့ သူ့ရဲ့အေးဂငျြ့ဖွဈသူထံ လှဲအပျထားတယျဆိုပမေယျ့ အသငျးရဲ့ တိုးတကျလာတဲ့ အခွအေနတှေနေဲ့ ကစားသမားသဈတှခေျေါယူပေးမှု့ကွောငျ့ ကနြေပျနကော ပေါဂျ့ဘာ ကိုသာ စာခြုပျသဈ တိုးပေးမယျဆိုရငျ သူ့ရဲ့လုပျခလစာကျု တဈပတျပေါငျ နှဈသိနျး ပေးရငျလညျး ကနြေပျစှာ လေးနှဈစာခြုပျသဈကို ထပျမံ တိုးမွှငျ့ ခြုပျဆိုမယျလို့ သိရပါတယျ။ ဂကျြဆီလငျဂါဒျ့ (၁၃၀၀၀၀)၊ မဆေငျဂရငျးဝုဒျ (၁၂၀၀၀၀) တို့ ရရှိနခြေိနျမှာ ဘရူနို အနနေဲ့ တဈပတျပေါငျ(၂)သိနျး ရရှိတာဟာ မြှတ တဲ့ ပေးခမြှျေု ဖွဈပွီး ပရီးမီးယားလိဂျရဲ့ ကှငျးလယျလူတှထေဲ ဂိုး+ဖနျတီးမှု့ စံခြိနျရှငျ ကစားသမား ဖွဈလို့ လာမယျ့ရာသီတှမှောလညျး ဘရူနို ဟာ လစာတိုးမွှငျ့စှာလကျခံ ရရှိရငျလညျး သူ့ရဲ့စံခြိနျတှကေို ပိုမို တိုးမွှငျ့ပွီး ကွိုးစားမှာဖွဈသလို ခွသျေ့အသဲနှလုံးသားနဲ့လူသားဖွဈတဲ့ ဘရူနို ဟာ လာမယျ့ရာသီမှာ အိုးထရဒျ့ဖိုဒျ့ထံ ဆုဖလားတှေ ဆှတျခူးယူလာနိုငျမလားဆိုတာကတော့….
Previous Article ပဲလေ့စ်နဲ့ပွဲအပြီး အ၀တ်လဲခန်းက သရဲနီတို့ရဲ့အခြေအနေကို ရှင်းပြခဲ့တဲ့ မာတစ်ခ်ျ
Next Article မန်ယူ ပြန်လာပြီလို့ အခိုင်အမာဆိုလိုက်တဲ့ ရာဖေးလ်ဒါဆေးဗား